Rakitra boky SYMFONISK, notsapainay ny fiarahan'ny IKEA - Sonos | Vaovao momba ny gadget
Talantalana SYMFONISK, notsapainay ny fiarahan'ny IKEA - Sonos
Isika izay tia an'ity tontolon'ny teknolojia ho an'ny trano ity dia efa niresaka hatramin'ny ela momba ny maha-zava-dehibe izany fifandraisana izany IKEA sy Sonos, ilay orinasa fanaka sy haingo malaza indrindra miaraka amin'ny iray amin'ireo orinasan'ny besinimaro ankafizin'ny besinimaro izay mankafy feo mifandraika sy tsara kalitao. Eny, efa manana eo amintsika ny vokatra voalohany nateraka tamin'ireto fiaraha-miasa ireto, Manana ny SYMFONISK talantalana sy ny jiro SYMFONISK izahay hizaha toetra ity fifanekena misy eo IKEA sy Sonos ity miaraka amin'ny fanadihadianay, halahelo azy ve ianao? Tsy dia inoako loatra izany…
Tahaka ny fahita matetika amin'ity karazana vokatra avo lenta ity dia nifidy izahay ny hanao fanadihadiana miaraka amin'ity lahatsoratra ity izay hitanao amin'ny fantsona YouTube anay ary lohateny famakiana manaraka. Toy ny mahazatra, tsara kokoa ny mahita azy toy izay mamaky azy io, ka mamporisika anao izahay alohan'ny hanombohana ity famakiana lalindalina ny fandalinana ity dia araraotinao ny unboxing sy ny fitsapana an-tariby izay nataonay tamin'ny vokatra SYMFONISK avy any IKEA sy Sonos. Raha tsy misy resaka intsony dia holazainay aminao ny fomba nahitanay ireo mpandahateny ireo.
1 Volavola sy fitaovana: Ikea kely, Sonos be dia be
2 Be mpandahateny, ary fitoeram-boky kely
3 Feo sy fifandraisana, fanomezan-dàlana avy amin'i Sonos
4 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra sy ny zavatra niainan'ny mpampiasa
Volavola sy fitaovana: Ikea kely, Sonos be dia be
Manomboka amin'ny voalohany amin'ny vokatra, ny talantalana ary mazava ho azy, manokatra ity famakafakana ity miaraka amin'ny endriny izahay. Izy io dia natsangana tamin'ny PVC ary misy firakotra lamba eo anoloana, izay manarona ireo mpandahateny, zavatra mahazatra. Izy io dia manana habe 23 x 21 x 32 centimetatra ho an'ny lanjan'ny 3,11 kilao. Io no zavatra voalohany tsy nampoizina anao, ary izany dia milanja be raha heverina fa plastika io, ary ity ho an'ny mpandahateny dia mariky ny kalitao. Izy io dia zavatra zarain'ireo mpandahateny hafa avy amin'ny orinasa Sonos ihany koa, ny lanjany dia manome antoka ny mpamily tsara ao anatiny sy ny feo voafaritra kokoa tsy misy tabataba sy hovitrovitra.
Loko: Mainty sy fotsy
fitaovana: Plastika sy lamba
Manana kinova roa mitovy amin'ny capacities isika fa samy hafa loko, afaka misafidy ny kinova mainty sy ny kinova fotsy isika, zavatra iray izay IKEA dia naka tamin'ny fomba amam-panaon'ny Sonos koa, izay manompo antsika rehetra ny mpandahateny amin'ireto andiany loko roa ireto. Ilay fonosana koa dia ahitana ny boky torolàlana kilasika, tariby manana ho an'ny fifandraisana amin'ny herinaratra izay mitovy endrika amin'ny mpandahateny sy tariby ethernet sokajy 5e raha toa ka mila mampifandray azy tsy misy WiFi isika. Mihoatra noho ny miresaka eo amin'ny sehatra famolavolana, mazava tsara fa miaro tena izy ary fifanekena eo amin'i Ikea sy Sonos. Azo apetraka amin'ny lafiny mitsivalana sy amin'ny marindrano ary ny bokotra telo eo alohany dia ahafahantsika mitantana ny mozika mora sy mandaitra.
Be mpandahateny, ary fitoeram-boky kely
Nahita mpandahateny iray izay tsy nanantenako firy aho, nefa nampahatsiahy ahy indray i Sonos fa na aiza na aiza hametrahanao ny tananao dia mampirongatra ny kanto izany. Mora foana anefa ny manao plug in IKEA Amin'ny ezaka maharitra manolotra anao ny vokatra amin'ny sombin-javatra, mampatsiahy anao haingana be izany fa raha te-hiraikitra amin'ny rindrina ianao dia tsy maintsy mividy an-tsoroka ireo mpanohana azy. na ny hook tsotra avy amin'ny € 6 na ny fanampiana feno (atolotra kokoa) amin'ny € 14. Vidiny izay tsy maintsy ihinao ampiana ny an'ny mpandahateny.
Manana talantalana izay lehibe ho an'ny mpandahateny isika, nefa kely ho an'ny talantalana. Amin'ny maha latabatra farafahakeliny farafahakeliny azy dia mety izany, saingy tokony hadinonao ny mametraka jiro, Qi charge base na amin'ny teny fohy, na inona na inona tianao hiaina eo amin'ny talantalana mandritra ny fotoana tsy voafetra, ny antony dia raha vantany vao laninao amin'ny volanao ny ny mozika, ary lazaiko aminao fa manana tady mandritra ny fotoana kelikely izy io, hiafara amin'ny tany farafaharatsiny, tsy misy raha tsy mampitandrina anao mialoha momba ny fikotrokotroka. Result: Tsara kokoa raha atambatrao amin'ny fanaka IKEA hafa toy ny talantalana KALLAX ary hadino ny mampiasa azy ho talantalana hampiasaina matetika.
Feo sy fifandraisana, fanomezan-dàlana avy amin'i Sonos
Raha efa naharesy ny ratra tamin'ny fametrahana azy ianao ary nahalala hoe aiza no hametrahanao azy dia afaka miala sasatra ianao, izao tonga ny ampahany mora. Ho an'ireo izay mankafy ny fitaovana Sonos sy ho an'ny olon-tsy fantatra dia fahafinaretana izany. Sintomy fotsiny ny fampiharana Sonos anao avy amin'ny Google Play Store na iOS App Store ary miroso amin'ny fikarohana mpandahateny vaovao. Tsindrio ny bokotra Play araka ny asehon'ilay rindrambaiko ary latsaky ny 10 segondra dia nametraka azy ianao ary miasa, farafaharatsiny, hisy fanavaozana miandry. Fotoana fohy aorian'izay dia afaka miroso amin'ny fananganana efitrano ianao mba hahatratra ny toerana rehetra ny feo marani-tsaina.
Fifandraisana tsy misy tariby via Wifi (tsy Bluetooth)
Fifanarahana amin'ny Spotify
Seranan-tsambo RJ45 - Ethernet
Mikasika ny kalitaon'ny feo dia gaga aho fa mandinika ny vidiny. Tsapanao haingana fa izany no izy Sonos satria na eo aza ny fanolorana feo Tena matanjaka amin'ny ambaratonga avo, zara raha mankasitraka fiatoana amin'izany ianao. Na dia dingana iray eo ambanin'ny Sonos One aza (izay manelanelana azy, vidiny avo roa heny), ny vidiny 99 euro dia azo hamarinina tanteraka amin'ny alàlan'ny kalitaon'ny feo avoakany, tsy lazaina intsony fa mamela anao hampifandray ireo mpandahateny i Sonos ny kaontinay Spotify, Deezer ary maro hafa. Ity maodely IKEA SYMFONISK ity dia manome antsika ny traikefa Sonos iray manontolo amin'ny fahatsoran'ny fanaka IKEA, izay omena ho an'ireo izay maniry handany kely kokoa ny andian-vokatra izay mandrapahatongany dia voafetra kely ihany.
Ity talantalana SYMFONISK avy any IKEA sy Sonos ity dia nanjary singa iray hafa tao amin'ny biraoko, Tsy afaka manome bebe kokoa ho an'ny kely kokoa ianao, ary io dia endrika, fitaovana, antoka ary kalitaon'ny feo amin'ny € 99 ihany tsy dia fahita loatra izany rehefa miresaka audio isika. Tsy azoko atao ny manolotra ity IKEA sy Sonos SYMFONISK ity ho fomba voalohany raha mankasitraka izay rehetra azon'ny vokatra Sonos azonao ianao, amin'ny antsasaky ny vidin'ny Sonos One, izao Tsy mangataka marika hafa hanatsara izany aho, fa ampifanaraho aminy. Izy ireo dia misy amin'ny ivon-toerana IKEA manomboka amin'ny 99 euro.
Talantalana SYMFONISK avy any IKEA sy Sonos
Fitaovana sy famolavolana mifanaraka amin'ny vidiny
Fanamorana ny fampiasana sy ny fifandraisana be loatra
Fametrahana tsotra an'i IKEA
Vidiny mandondona ho an'ny vokatra toy izany
Aza avela IKEA raha tsy misy fononteny rindrina, izay misaraka
Tena tsy dia ampiasaina firy amin'ny fitoeram-boky io
Afaka manana mic sy mpanampy Alexa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Talantalana SYMFONISK, notsapainay ny fiarahan'ny IKEA - Sonos
Raha manoratra betsaka amin'ny Mac, iPad na iPhone ianao, dia mety hahaliana anao i Ulysses
Fresh´n Rebel CLAM, mampanantena fahaiza-manao, fampiononana ary kalitao [Analisis]